Bar Bar Black Ondry 5 Reel Bar Bar Black Ondry 5 Reel
Raha tia ny toeram-pambolena fiainana ambanivohitra avy eo Bar Bar Black Ondry 5 miraingiraingy azon'ny no slot finday lalao tianao ny handinika milalao. izany slot finday UK ambony ny dia nilalao tamin'ny lalao 15 paylines izay raikitra nefa afaka hanitsy ny vola madinika haavon'ny lanja sy ny vola madinika toy ny isan-ny mila. Ny firenena amim-pifaliana mozika eo aoriana mitandrina ny tongotrao nipaipaika ny ny miray feo. Ny sary lafika dia avo famaritana toeram-pambolena amin'ny ondry ary manerana ny Windmill teny lavidavitra teny izay manome anao mihevitra tanteraka ny fomba fiainana toeram-pambolena tarehiny. Afaka mifidy ny Bet vola manomboka amin'ny £ 0,15 dia hatsangako indray izy ny Max ny £ 150 isan-kofehy ireny.
Momba ny developer ny Bar Bar Black Ondry 5 miraingiraingy azon'ny:
Ity zaridaina tsara tarehy slot finday UK ambony ny lalao dia novokarin'ny Microgaming, ny developer malaza noho ny famoronana lalao amin'ny zava-misy lohahevitra izay mahatonga anao mahatsapa ianao anisan'ny lalao. Namorona maro izy ireo finday toby slots mba hahafahanao milalao sy hahazo vola an-dalana.
izany slot finday UK ambony ny dia nilalao tamin'ny lalao fito tena mahaliana ny fanehoana an'ohatra ny ondry mainty, ondry fotsy, toeram-pambolena trano, Bar, paoma, voasary, voajabo, brinjal ary ny katsaka cob. Ny fanehoana an'ohatra ambony fandoavana ny dimy tamin'izy ireo, rehefa hiseho manerana ny 2 laharana mainty ondriny 10000 fotoana ny tsatòka, ondry fotsy izay mandoa 8000, 6000 fotoana miaraka amin'ny trano sy ny toeram-piompiana Bar payout dia 5000 fotoana ny tsatòka. Misy tombony roa marika ity slot finday lalao; izy ireo ny lalao famantarana sy kitapo feno volon'ondry.
Wild ka ampielezo Features: An'ala ity slot finday UK ambony ny solon'ireo zavatra rehetra, afa-tsy ny aelezo ary mifanitsy amin'ny lalao Logo. Dimy tao amin'ny mahitsy-dalana, ny laharana afovoany afaka koa ny anao 20000 fotoana ny tsatòka. Ny harona ny volon'ondry no afaka hampiely spins ary manome anao 10, 15 na 20 spins maimaim-poana ao amin'ny fipetrahana 3, 4, na 5 fotoana nandritra ny kofehy ireny. Dimy izany koa ny manome anao 15000 fotoana ny tsato-kazo miaraka amin'ny maimaim-poana spins.
Black Ondry hetsiky: Ny endri-javatra dia antsoina hoe Bar Bar Black toy ny ondry aman'osy sy ny anarana dia manolotra ny endriky ny roa Bar marika mainty miaraka amin'ny ondry ao amin'ny tsipika mahitsy dia mampiasa ny endri-javatra. Raha vao niteraka, Fandresena rehetra efa betsaka ny ho amin'ny 999 fotoana izay mety hahatonga anao maloto manan-karena.
famintinana: izany slot finday UK ambony ny tanteraka raha te-wager ny vola sy hahamaro azy an'arivony ny fotoana sy manao tombom-barotra be. Ny lalao ho an'ny olona matotra, izay manao ny velona amin'ny alalan'ny slot milalao lalao.
Ny fotoana dia vola